भ्यागुतोको प्रेमकथा देख्नुभएको छ ? छैन भने मण्डला जानुहोस् « THULOPARDA.COM: Entertainment News Portal From Nepal
भ्यागुतोको प्रेमकथा देख्नुभएको छ ? छैन भने मण्डला जानुहोस्
Published On : August 30, 2014
हामीले मान्छेको प्रेम कथा त धेरै देखेका र सुनेका छौ । तर भ्यागुतोको प्रेमकथा देख्नुभएको छ ? छैन् र यदि उत्सुक हुनुहुन्छ भने राजधानीको अनामनगरस्थित मण्डला नाटकघर जानुभए हुन्छ ।
गत भदौ ६ गतेबाट हरेक साझ ५:१५ वजे त्यँहाको अध्यारो कोठामा एउटा भ्यागुतो भेटिन्छ । जो बकुल्लाको डरले आफ्नो टोलबाट भागेको हुन्छ र उसको भेट एउटा भ्यागुतीसँग हुन्छ । अनी कमिलाको प्रेम जोडीलाई देखेर भ्यागुतोले उक्त भ्यागुतीसँग प्रेम गर्न थाल्छ ।
कुरा हो नाटक ‘जम्पिङ् फ्रग’ को । यसमा भ्यागुताले एउटा भ्यागुतीलाई आफ्नो बनाउनका लागी गरेको संघर्षलाई देखाउन खोजिएको छ । परिवारलाई मनाउने क्रमदेखि उसले भागेको मानसिक संकटसम्म लाई नाटकमा कलात्मक ढंगले प्रस्तुत गरिएको छ ।
नाटकमा मान्छेभन्दा बढी जनावरहरु पात्रका रुपमा प्रस्तुत भएका छन् । मुखौटा, कठपुतली र सङ्गीत मात्र नाटकमा प्रयोग गरिएको छ । नाटकमा कुनै शब्द संवाद भने छैन् । एउटा भ्यागुताले जलवायु परिवर्तन र त्यसले पृथ्वीलाई पार्ने असरका बारेमा कसरी चिन्ता लिइरहेको छ, त्यसलाई पनि नाटकमा देखाउन खोजिएको छ ।
सजन थापा मगरले निर्देशन गरेको यो नाटकका कार्यकारी निर्माता मुखिया गुरुङ् हुन् । नेपालमा नेपाली कलाकारहरुद्वारा पपेट अर्थात कठपुतलीको नाटक पहिलोपटक मञ्चन भएको निर्देशकको दाबी छ ।
यसअघि सन् २०१० मा आरोहण गुरुकुलद्वारा आयोजित काठमाण्डौ अन्तराष्ट्रिय नाटक महोत्सवमा स्पेनको कुलुन्का टिएट्रोले ‘आन्द्रे एण्ड दोरीन’ नामको सम्भवत : पहिलो पपेट नाटक देखाएको बताइएको छ ।
नाटकका निर्देशक सुजन, अरोहण गुरुकुलका उत्पादन हुन् । उनले पहिलो पटक निर्देशन गरेका हुन् । ‘नाटकमा मैले मानिस र जीवहरुबीचका ‘मानजीवीय’ पाटाहरु केलाउने प्रयास गरेको छु, कत्तिको सफल भए, त्यो त दर्शकको प्रतिक्रियाले नै बताउनेछ’, उनले भने ।
नाटकमा अनुपम शर्मा, बिराट बस्नेत, आदित्य कटुवाल, रुरु पोखरेल, प्रकाश गन्धर्व लगायतका कलाकारहरुको अभिनय छ । असोज ५ गतेसम्म नाटक चल्ने बताइएको छ ।
भ्यागुताले आफ्नो भ्यागुती पाउँछ की पाउँदैन्, त्यो हेर्नका लागी चाँही मण्डलाको नाटक घर नै जाने की ?